पिटर लिंच वाक्यांशहरु: 17 सर्वश्रेष्ठ, जो पीटर लिंच हो र उसले कसरी लगानी गर्छ अर्थव्यवस्था वित्त
जब हामी कुनै विषयमा सिक्न वा सुरु गर्न चाहान्छौं जुन हामीले पहिला कहिल्यै सोचेका थिएनौं वा सबैभन्दा थोरै भएमा, सबैभन्दा सल्लाह चाहिने कुरा भनेको आफूलाई सूचित गर्नु, अध्ययन गर्नु र यस क्षेत्रका प्रसिद्ध व्यक्तिहरूलाई हेर्नु हो। अर्थशास्त्र को दुनिया मा यो उही छ। ठूला लगानीकर्ताहरू र अर्थशास्त्रीहरूसँग हामीलाई दिने धेरै सल्लाहहरू छन्, त्यसैले हामीलाई उनीहरूको ज्ञानहरू पढ्न कहिल्यै दुख्दैन, जस्तो कि पिटर लिन्चको वाक्यांशहरू।
जब यो लगानीको कुरा आउँछ वित्तीय धेरै जटिल र जोखिमपूर्ण हुन्छन्। कि कारण हामीले हाम्रो पैसा उजागर गर्नु अघि हामीले सकेसम्म सबै थोकहरू लैजानु पर्छ हामी के गर्दैछौं भनेर जान्दैनौं। यस कारणले हामीले यो लेखलाई पीटर लिंचको भनाइहरूमा समर्पित गरेका छौं। थप रूपमा हामी यस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को हो र उसको लगानीको दर्शन के हो भन्ने बारेमा थोरै कुरा गर्नेछौं।
1 पीटर लिंचको १ best राम्रा वाक्यांशहरू
2 पिटर लिन्च को हो?
2.1 पिटर लिंचले कसरी लगानी गर्छ?
पीटर लिंचको १ best राम्रा वाक्यांशहरू
यो आशा गरिएको छ कि, वित्तीय दुनिया मा यति धेरै वर्ष क्यारियर को समयमा, पीटर लिन्च धेरै वाक्यांश स accum्केत गरेको छ कि ती सबै जो एक अन्तर्राष्ट्रिय बजार मा शुरू गर्ने निर्णय को लागी एक गाईड को रूप मा सेवा गर्न सक्छन्। अब हामी पिटर लिन्चको १ best राम्रा वाक्यांशहरूको सूची देख्नेछौं:
"स्टकबाट पैसा कमाउने कुञ्जी तिनीहरूसँग डराउनु हुँदैन।"
"तपाईं छोटो अवधिमा पैसा गुमाउन सक्नुहुनेछ, तर तपाईंलाई पैसा बनाउनको लागि दीर्घ अवधि चाहिन्छ।"
"यो जान्नु महत्त्वपूर्ण छ कि हरेक स्टकको पछाडि एउटा कम्पनी हुन्छ, र त्यहाँ स्टकहरू बढ्नुको एउटा वास्तविक कारण छ। कम्पनीहरूले खराब प्रदर्शनबाट राम्रो प्रदर्शनमा जान्छन्, वा साना ठूलाहरू ठूला हुन्छन्। "
"यदि तपाइँ कम्पनीहरूको विश्लेषण गर्नुहुन्न भने, तपाईसँग पोकर खेलाडीले कार्ड नहेर्ने शर्तमा सफलताको समान सम्भावना हुन्छ।"
लगानी एउटा कला हो, विज्ञान होईन। जो मानिस कडाईका साथ सबै कुरा मापन गर्ने झुकाव हुन् भने नोक्सानमा हुन्छन्। "
"कुनै पनि विचारमा कहिले पनि लगानी नगर्नुहोस् जुन तपाईं पेन्सिलको साथ चित्रण गर्न सक्नुहुन्न।"
"खरीद गर्न उत्तम कम्पनी त्यो हुन सक्छ जुन तपाईंसँग पहिले नै तपाईंको पोर्टफोलियोमा छ।"
ठूला आश्चर्य को मामलाहरु को बाहेक, कार्यहरु बीस बर्ष को अवधि मा एकदम पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ। अर्को दुई वा तीन बर्षमा उनीहरू माथि जान्छन् वा तल जान्छन्, यो सिक्का फ्याँक्नु बराबर हो।
“यदि तपाईंले तेह्र मिनेट भन्दा बढी बजार र आर्थिक पूर्वानुमानमा छलफल गर्नुभयो भने, तपाईंले १० मिनेट खेर फाल्नुभयो।
"यदि तपाईंलाई स्टोर मनपर्दछ भने, तपाईंले सायद यो कार्य मनपराउनुहुनेछ।"
तपाईंले बुझ्नुहुने चीजहरूमा लगानी गर्नुहोस्।
"कुनै कम्पनीमा पहिले यसको वित्तीय कथन थाहा नहुँदा कहिले पनि लगानी नगर्नुहोस्।"
Long लामो अवधिमा कम्पनीको परिचालन सफलता र शेयर बजारमा उसको सफलताको बीचको सहसंबंध १००% हो। यो असमानता भनेको पैसा कमाउने कुञ्जी हो। "
"यदि बोर्डले आफ्नै कम्पनीमा सेयर खरीद गर्दै छ, तपाईंले पनि यस्तै गर्नु पर्छ।"
"सबै लगानी एकै हुँदैन।"
"कुनै पनि अन्य सम्पत्ति अघि शेयरहरूमा लगानी गर्नुहोस्।"
"तपाइँ भविष्य पछाडिको दर्पण प्रयोग गरेर देख्न सक्नुहुन्न।"
पिटर लिन्च को हो?
पिटर लिंचको भनाइलाई राम्ररी बुझ्नको लागि हामीले यो महान अर्थशास्त्री को हो र उसको लगानीको दर्शन के हो भनेर थाहा पाउनुपर्दछ। अहिले विश्वव्यापी संसारमा सब भन्दा मान्यता प्राप्त र मूल्यवान सम्पत्ति प्रबन्धक हो। उहाँ फिडेलिटी मेगेलन कोषको जिम्मेवार हुनुहुन्छ, जुन १ 29 .1977 देखि १ 1990 23 ० को अवधिमा २ XNUMX बर्ष सम्म वार्षिक २%% रिटर्न पाएको थियो। यस कारणले गर्दा, लिन्च सबै ईतिहासको सबैभन्दा सफल कोष व्यवस्थापकहरू मध्ये एक मानिन्छ। थप रूपमा, उहाँ धेरै प्रकाशनहरू र लगानी रणनीतिहरू र बजारहरूसँग सम्बन्धित किताबहरूको लेखक हुनुहुन्छ।
पिटर लिंचले कसरी लगानी गर्छ?
पीटर लिंचको सबैभन्दा लोकप्रिय लगानी सिद्धान्त भनेको स्थानीय ज्ञान हो, जुन ज्ञातमा निवेश गर्छ। धेरै जसो व्यक्तिहरू केहि विशिष्ट क्षेत्रहरूमा विशेषज्ञता राख्दछन्, यस धेरै आधारभूत अवधारणाको प्रयोगले लगानीकर्ताहरूलाई राम्रो र मूल्य निर्धारण स्टक पाउन मद्दत गर्दछ। यस महान अर्थशास्त्रीले हाइलाइट गरेका विचारहरू हुन् थोरै withण भएका कम्पनीहरूमा लगानी गर्नुहोस्, जसको नाफा वृद्धि चरणमा छ र जसको सेयरहरू उनीहरूको वास्तविक मूल्य भन्दा कम छन्। यो पीटर लिन्च द्वारा केहि वाक्यांशहरूमा प्रतिबिम्बित हुन्छ।
जर्ज सोरोस उद्धरण
लिंचको लागि, यो सिद्धान्तले प्रत्येक लगानीको सुरूवात पोइन्ट प्रतिनिधित्व गर्दछ। थप रूपमा, धेरै अवसरहरूमा उनले टिप्पणी गरे कि उहाँ अनुसार, एक व्यक्तिगत लगानीकर्ताको सफलता को एक राम्रो मौका र कोष प्रबन्धक भन्दा पैसा बनाउन को एक राम्रो अवसर छ। यो किनभने तपाईको दैनिक जीवनमा राम्रो लगानीको अवसरहरू भेट्टाउने सम्भावना बढी हुन्छ।
अन्य लगानी दर्शनहरूको लागि, पीटर लिंचले बारम्बार तथाकथितको आलोचना गरेका छन् बजार समय। यो भविष्यको मूल्यहरुको भविष्यवाणी गर्ने प्रयासको बारेमा हो। उसको अनुसार, "सुधारको तुलनामा बजार सुधारको आशा गर्न धेरै पैसा हराएको छ।" यद्यपि यो हाम्रो उत्तम लिटर लिन्च वाक्यांशहरूको सूचीमा देखा पर्दैन, निस्सन्देह यो एकदमै राम्रो प्रतिबिम्ब हो।
मलाई आशा छ यी पीटर लिन्च उद्धरणहरू तपाईंको लागि सहयोग र प्रेरणाको रूपमा छन्। तिनीहरू राम्रो सल्लाह र परावर्तन हुन्, विशेष गरी यदि हामी वित्तको संसारमा नयाँ छौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: अर्थव्यवस्था वित्त » सामान्य अर्थव्यवस्था » पीटर लिंच उद्धरण
प्याकेजि and र शिपिंग: के प्रकारहरू अवस्थित छन् र कुनचाहिँ सब भन्दा राम्रो हो